Ukutyelela ngokunyanisekileyo eSpeyin - IiSpeyin
Iwayini esuka eSpain
Ukutyelela okufunekayo eSpain
ESpain ngeengqondo ze-5
Ukutyelelo olufanelekileyo kwiimyuziyam, izikhumbuzo, izitiya, njl. lonke iSpeyin. IMadrid, i-Barcelona, ​​i-Valencia, iIlesaric Islands, iiIriary Islands kunye nazo zonke izixeko ezibandakanya ilizwe elimangalisayo eliseSpain.
Udidi: Iwayini esuka eSpain/Ukutyelela okufunekayo eSpain
Vinos del Bierzo, iNkolelo yokuqala kwefashoni kwihlabathi
Kuthunyelwe Kwi 16 Februwari, 2019 16 Februwari, 2019 By HBamagqabantshintshi
Iwayini le-Bierzo leSpeyin liye linyuka kwiimfuneko emhlabeni jikelele, kwaye akuyona nje ifowuni njengoko isihloko sithi. Amacwecwe aseMencía ayenayo ngokusekelwe kwindlela abazixabisa ngayo kwizizukulwana. I-Vinos del Bierzo ibonakaliswe ngamandla okuphakathi, kakhulu Qhubeka ufunda
Ukufunyanwa KweSpeyin! Isitoreji sakho kwi-intanethi yemveliso yaseSpanish Ukuthunyelwa kuzo zonke iYurophu
Iingcamango zokunika iwayini kwiSuku loBawo
Aceites Camino de Aníbal, iGourmet Quality esuka eAlbacete
UHam weTeruel El Ferial, umgangatho kunye nesithethe
Iwayini kunye neGastronomy Shop
Ilungelo lobulungisa Okulungileyo okugcinweyo Isihloko: iGalway Lite Themeinwp
Le webhsayithi isebenzisa ikhukhi ukuqinisekisa ukuba ufumana amava afanelekileyo kwiwebhusayithi yethu.
Ukhetho lwangasese kwindawo
Ikhukhi iifayile okanye idivaysi ekhutshelwe kwisixhobo sokugcina umsebenzisi ngenjongo yokugcina idatha engahlaziywa kwaye ifunyenwe liziko elijongene nokufakela kwayo. Oko kukuthi, ifayile ekhutshwe kwikhompyutha yakho xa ufinyelela kumaphepha athile eWebhu. Ikhukhi vumela iphepha leWebhu, phakathi kwezinye izinto, ukugcina nokufumana ulwazi malunga nemikhwa yokukhangela yomsebenzisi okanye izixhobo zazo, ngokuxhomekeke kwingcaciso abayifake kunye nendlela abasebenzisa ngayo izixhobo zabo, banokusetyenziswa kumsebenzisi
Luhlobo luni lweekhukhi olusebenzisa le website?
Le webhsayithi isebenzisa iikhukhi ezivumela abasebenzisi ukuba basebenzise kwaye bahambe ngayo, baqinisekise ukufikelela kwiinkonzo ezithile, kunye nokuphuculwa koqwalaselo olusebenzayo lwewebsite.
Ngokukodwa, le website isebenzisa ikhukhi ezilandelayo:
Uhlalutyo Ikhukhi: Ezi cookies zisetyenziselwa ukuqhuba uhlalutyo lweendlela zokuziphatha kunye nezenzo zabasebenzisi bephepha leWebhu kunye nokuhlaziywa kweenkcukacha zokuhamba ukuze kuphuculwe ubugcisa kunye nokusebenza.
Isicelo esisisebenzisayo ukulawula ezi cookies yipropati ye-Google Analytics (www.google.com/analytics/)
Indlela yokulawula ukucwangciswa kwekiki?
Kule candelo kwincwadana emfutshane yendlela yokubonisana kunye nokwenza ukucwangciswa kwenkqubo kunye nekiki ngokubhekiselele kwizibhenqa eziqhelekileyo okanye eziqhelekileyo ezisetyenziswayo.
Ngaloo ndlela, ngokuqinisekileyo zonke iiphequluli zivumela umsebenzisi ukuba athole ulwazi olubanzi malunga nekhukhi ezifakwe kwiphepha lewebhu, ngokuqinisekileyo ukuqinisekisa ubungqina obufanayo, ubude babo okanye inkqubo yokuqeda. Ngaloo ngqiqo, ngenjongo yolwazi, uluhlu lwekhonkco ezinxulumene nalo lunikwa:
Ngakolunye uhlangothi, umsebenzisi unokuvumela, ukuvimba okanye ukuphelisa ii-cookie ezifakwe kwisixhobo sakhe ngokuguqula ukuqwalaselwa kwesiphequluli sakhe ngokwemiyalelo eboniswe kuyo. Ngenjongo yolwazi kuboniswa ukuba ngokuqhelekileyo ukucwangciswa kwekiki kudlalwa kwindlela ye "Intandokazi" okanye "Izixhobo" zesiphequluli ngasinye, nangona kunjalo, unokuhlala ucela uncedo kwisiphequluli sakho ukuxazulula okanye ukusombulula ukungathandabuzeki ukuba intlonipho iveliswe.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba, ukuba ukufakela yonke ikhukhi kuphetshwe, umxholo wewebhu kunye nemisebenzi ethile kunye neenkonzo ezinikezelwayo unokuchaphazeleka.